warkii.com » Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Jimce Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Jimce Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Haddaba, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey suuqa iibka ciyaartoyga ee ay maanta oo Jimce ah qoreen Wargeysyada waaweyn ee Yurub:
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka fikiraya inuu xagaagan u dhaqaaqo difaaca bidix ee kooxda Bayern Munich ee David Alaba oo 28 jir ah. (Mirror)
Kevin De Bruyne kama tegi doono Man City xagaagan, xataa haddii laga ganaaxo tartanka Champions League, sida uu sheegay wakiilkiisu. (Sporza)
Difaaca Tottenham ee Eric Dier oo 26 jir ah, wuxuu doonayaa in loo laban-laabo mushaharkiisa hadda uu ka qaato kooxdaas oo toddobaadkii ah £60,000 gini. Xiddiga reer England waxa qandaraaska uu kula jiro Spurs ka hadhay wax ka yar 12 bilood. (Mail)
John Stones oo 26 jir ah, difaacana uga ciyaara Manchester City iyo xulka England, kama fikirayo inuu ka tago kooxdiisa, inkasta oo mustaqbalkiisu aanu sugnayn. (Mail)
Tababare Pep Guardiola waxa uu rumaysan yahay in difaaca reer Spain ee Eric Garcia oo 19 jir ah, uu iska diidi doono heshiiska lacagta badan uu ku qaadanayo ee ay usoo bandhigtay kooxdiisii hore ee Barcelona. (Times)
Arsenal waxa ka go’an inay sii xajisato goolhayaha reer Argentine ee Emiliano Martinez oo 27 jir ah, kaddib markii uu dhaawacmay goolhaye Leno oo isbeddel ku keenay qorshahoodii goolka ee xagaagan. (Mirror)
Real Madrid waxay diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada laga soo ggudbiyo weeraryahanka reer Serbia ee Luka Jovic oo 22 jir ah. (Marca)
Leicester City ayaa rumaysan inay Luka Jovic kagala soo saxeexan karto Real Madrid lacag dhan £31 milyan oo Gini, waxaanay mar horeba la xidhiidhay wakiilka ciyaartoygan. (Star)
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Mchael Zorc, waxa uu sheegay in kooxda reer Germany ay haddaba diyaarsanayso beddelka laacibka reer England ee Jadon Sancho oo 20 jir ah. (Kicker)
Laacibka Barcelona garabka uga ciyaara ee Ousmane Dembele oo 23 jir ah, waxa uu kusoo baxay dookha labaad ee Manchester United, waxaanay u dhaqaaqi doontaa sidii ay u keeni lahayd Old Trafford haddii ay ku guul-darraysato inay Sancho kala soo wareego Borussia Dortmund. (Star)
Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer waxa uu sheegay in kooxdiisu doonayso inay lasoo saxeexato weeraryahan garabka midig ah iyo weeraryahan dhexe dhexe. (Telegraph)
Liverpool waxay maxkamad la geli doontaa Fulham, si loo go’aamiyo lacagta magdhowga ah ee lagaga doonayo saxeexii Harvey Elliott. 17 jirkan ayaa Reds kusoo biiray xagaagii hore markii uu dhamaaday qandaraaskiisii Craven Cottage. (Liverpool Echo)
Real Madrid waxay qorshaynaysaa in sannadka 2021 ay soo iibsato weeraryahanka kooxda PSG iyo xulka qaranka France ee Kylian Mbappe oo 21 jir ah iyo khadka dhexe ee reer France ee Eduardo Camavinga oo ah 17 jir u ciyaara Rennes, waxaanay labadan ciyaartoyba u sheegtay in aanay cusboonaysiinin heshiisyadooda dhamaadka ah ee ay kula jiraan kooxahooda. (Sport)
Inter Milan ayaa doonaysa inay Chelsea kasoo qaadato difaaca bidix ee Talyaaniga ah ee Emerson Palmieri oo 25 jir ah iyo weeraryahanka reer France ee Olivier Giroud oo 33 jir ah. (Goal)
Goolhayaha Maraykanka ah ee Zack Steffen oo 25 jir ah, kuma soo laaban doono kooxdiisa Manchester City xili ciyaareedka soo aaddan, kaddib markii uu fasal ciyaareedkan 2019/20 ku dhamaystay amaah uu kula joogay Fortuna Dusseldorf. (ESPN)
Chelsea waxay kula biirtay Manchester City iyo Juventus tartanka loogu jiro da’yarka kooxda Penarol ee Facundo Pellistri oo 18 jir ah. Laacibkan ka ciyaara garabka ayuu heshiiska uu kula jiro kooxdiisu ku egyahay sannadka 2022. (Calcio Mercato).